Nhau - Sarudza Micro Irrigation system, chengetedza madonhwe ese emvura!
Kubva kutanga kwegore rino, dzakawanda zvekurima zvigadzirwa zvinotengesa nyika pasi rese zvakatambura nekusanaya kwemvura, izvo zvakakonzera zvakanyanya hupfumi hwepasi rose.
Semuenzaniso, United States neBrazil vakatambura nekusanaya kwakakomba. Gorosi, chibage, uye soya vakatambura nekusanaya kwemvura, izvo zvakaita kuti mitengo yezvokudya yepasirese inyanye. Uye zvakare, zvikamu zveRussia neCanada zviri kutamburawo neepamusoro tembiricha nekusanaya kwemvura. Nyika dzinoverengeka dzakakosha dzinogadzira zviyo uye nyika dzinotengesa zviyo dziri kusangana nedambudziko rakaoma rekusanaya kwemvura.
Izvi zvinoda zvakanyanya kukodzera kudiridza nzira uye nezvimwe kudiridza chaiko nzira, dzinogona kuburitsa chikafu chakawanda nemvura shoma.
Zvinoenderana nehuwandu, mafashama echinyakare kudiridzainoda 60-80 m³ mvura yeeka yevhu, kudiridza kwekusasa kunoda 40-50 m³, uye kudiridza kwekudonha kunongoda 25-30 m³. Zvakanakira kuchengetedza mvura zviri pachena kwazvo!
Munzvimbo dzakaoma uye dzakapisa dzekupisa, nyangwe funga nezvekushandisa kwepasi kudonhedza kudiridza (izvo zvinogona kudzikisira kurasikirwa kwemvura zvakanyanya, mvura nefotereza zvinotakurwa zvakananga kumidzi, zvine hunyanzvi hwekushandisa; inogona kudzora kukura kwesora, kudzikisa huwandu yemishonga yesora, uye kuva ane ushamwari zvakatipoteredza; Mhedzisiro yekushandisa pasi pevhu kudonhedza munzvimbo yepamusoro yekupisa uye kusanaya kwemvura kwakanaka kwazvo).
Kunyangwe munzvimbo dzine mvura inonaya yakakwana, iwe unogona achiri kusarudza chaiyo kudiridza kana Micro kudiridza system. Kuchengetedza kudiridza hakusi kungori nyore sekuchengetedza mvura, pane zvakawanda zvakanaka, zvakadai se: